I-Afta mucosa - isifo se-mucosa yomlomo - sinokukhula njengengxaki emva kwezinye izifo (ngokuqhelekileyo isicathulo sesisu), kunye nesifo esizimeleyo. Ukuvuvukala komlomo we-mucosa: i-aphthae, amanxeba angenzeka nge-stomatitis engapheliyo kunye ne-stomatitis. Esi sifo, i-aphthae enye okanye ezininzi ikhula kwi-mucosa yomlomo. Okokuqala, kubonakala ukugquma, kugcwele umbane ocacileyo, ngoko bahamba, bashiya emva kwesilonda sesigxina okanye umlo ovalwe nge-gray-yellowing. Ukuvutha komlenze womlomo kuhambelana nomkhuhlane, ukwandisa i-lymph nodes, intlungu kunye nomsindo ovuthayo emlonyeni, ingakumbi ngexesha lokutshiza. Kule nqaku, siza kuphakamisa iindlela zokunyanga izifo ze-mucosal zesigidi somlomo.
Ngeentlobo zegazi, ukukhululeka kwazo, kunye nokunyanga kwezilonda ezingapheliyo zokuphulukisa izilonda, izi ndlela zokupheka zamachiza ezilandelayo zingasetyenziswa:
uthathe iingu-40 ezinzulu zengcambu ze-burdock ezinkulu, zitshize, zongeza i-100 ml yeoli ye-sunflower. Vumela umxube ukuma iiyure ezingama-24. Ukupheka imizuzu elishumi elinesihlanu ngokushisa okuphantsi, uze uhlume. Ioli elungiselelwe i-lubricate engaphilisi izilonda kwi-membrane yomlomo.
fakela ijusi elitsha kwiingcambu zerhasi. Nciphisa isigamu samanzi uze uyisebenzise kathathu ngosuku ukuze ususe umlomo.
ukukhupha i juyisi kwi-blackberry, yiphuphuze ngamanzi afudumele kwaye usebenzise njengoko uhlambulula izilonda zomlomo we-mucosa.
fake ijusi esitsha kwiidroti uze uhlambe umlomo wabo kabini okanye kathathu ngosuku.
Ezi zokupheka zamachiza omntu ziya kuba luncedo kwiibhagi zomlomo kunye nokuhlamba umlomo ukuphilisa i-aphthae, amanxeba e-mucosal.
Kule qoqo, ezi zixhobo ezilandelayo zonyango ziza ku funeka: ii-2 ze-rhizomes ze-calamus eziqhelekileyo; imibala emininzi ye-marigold; inxalenye yeentyantyambo ze-chamomile, inxalenye yegxolo le-white willow; inxalenye yombala wombala. Ukuxhamla, okulungiselelwe kule ngqokelela, kusetyenziselwa ukuhlambulula umlomo womlomo, kunye nokungenisa - kwisahlulo sesithathu seglasi ngelihlandlo kathathu ngosuku.
Ukuqokelela kuqulethwe iingubo ezi-2 zengcambu ye-althaea officinalis, enye inxalenye yamagqabi amabhasi e-birch, enye inxalenye ye-cocklebur efanayo. Isetshenziselwa intlungu njengento yokucoca.
Ukubunjwa kweqoqo kubandakanya oku kulandelayo: iindawo ezimbini zeentyantyambo ze-calendula, ezininzi i-rhizomes zesityalo njengoko iphakamile, inxalenye yengcambu ye-licorice, inxalenye yengca ye-cocklebur. Isenzo - ukuchasana nokuvuvukala. Isetyenziselwa ukuhlambulula umlomo.
Ukulungiselela le ngxowa-mayeza kuyimfuneko: 1 inxalenye yeziqhamo ze-gooseberries eziqhelekileyo, ii-2 zezityalo zelwandle-buckthorn; 1 inxalenye yesithelo se-currant ebomvu kunye ne-1 inxalenye-emnyama. Ukuxhamla okulungiselelwe ukusuka kule kholeji kusetyenziselwa ukuhlanza umlomo uze ungene kwisigamu indebe kathathu ngosuku. Lungisa ukumnika ngoko: thabatha i-10 tbsp. i-spoonful of materials raw, yongeza ilitha le-1 yamanzi atshisayo abilisiwe kunye nokushisa kwindawo yokubhukuda umphunga imizuzu elishumi elinesihlanu. Emva koko kufuneka uhlaziye amajikijolo uze unike umxube ukuma isigxina seyure, uze uwuhluze. Ukunciphisa okunjalo kunemiphumo echasayo-evuzayo, e-analgesic neyophulukisa.
Kulo qoqo lwezonyango, iindawo ezi-2 ze-oak bark kunye ne-1 inxalenye yombala we-lime iyadingeka. Isetshenziselwa ukuhlanza xa ukhulula iigums.
Xa unyango lwe-stomatitis engapheliyo ezilandelayo zityalo zisetyenziswa:
Ihhashi ye-Sorrel (ingcambu). Umhluzi usetyenziselwa ukungena kunye nokuhlanjwa komlomo. Umhluzi ulungiselelwe ngale ndlela: thabatha i-1 tbsp. i-spoon ye-sorrel engciniweyo, engeza i-1 indebe yamanzi abilayo, ulethe kwi-thumba uze uqhubeke udibanisa enye imizuzu eyi-15. Shiya umhluzi weeyure ezingama-2 ukuza, ke uhlume. Inkqubo yokuhlambulula umlomo kufuneka iqhutywe kathathu ngosuku, emva koko ithathe isipuni esisodwa se-decoction ngaphakathi.
I-Calendula officinalis (iintyatyambo). Iyeza zonyango zicebisa le mpiliso yamachiza kwiibhagi zomlomo kunye nokulawulwa komlomo. Indlela yokupheka: thatha iipunipoli ezi-2 zezinto eziphathekayo, wongeza iikomityi ezimbini zamanzi ashushu abilisiwe. Ikhefu ukunika imizuzu engama-15, ngoko ke. Ibhafu yomlomo iqhutyelwa kathathu ngosuku, kwaye ke kufuneka uthabatheke phezu kwepunipoon ngaphakathi.
Amaqabunga e-nettle adiyoceous. Ukuxhamla kusetshenziselwa ukuhlambulula isigxina somlomo. Yilungiselele ngale ndlela: thatha isipuni se-1 sezinto eziphathekayo, faka iikomityi ezimbini zamanzi abilayo uze ushiye ukunika isithuba seyure, uze unyuse ukukhulelwa.
Iqoqo leziyobisi: i-althaea yamayeza (ingcambu) - 1 inxalenye; I-cocklebur evamile (izityalo) - inxalenye e-1; I-Oregano eziqhelekileyo (utshani) - 1 inxalenye; I-oak ejwayelekile (ibhakede) - ii-2 izingxenye. Ukufakelwa kwamanzi okulungiselelwe kwisiseko sale qoqo kusetyenziswa ukubamba ibhafu yomlomo ngaphambi kokutya kunye neyure emva kwayo. Iinkqubo zenziwa ezine ngosuku.
Ukukhupha isisu: i-pros and cons
Iimfashini zohlobo lwebusika ngo-2009-ngo-2010
Indlela yokuthetha nabantwana malunga nobugcisa?
Iimpawu ezimnandi kwi-prom in nursergen kunye nezikolo (ii-11, 9 neye-4)
Iingqolowa zokutya kwasekuseni, iziphene
Indlela yokuziphatha kakuhle nomntwana emva komtshato?
Indlela yokuziphatha xa umiselwe njengomlawuli wekampani
I-mushroom kunye nesaladi yeqanda